1 Ndị Eze 11 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ndị Eze nke Mbụ 11:1-43
Ndị nwunye Solomọn mere ka obi ya pụọ n’ife Chineke (1-13)
Ndị iro Solomọn (14-25)
E kwere Jeroboam nkwa na ọ ga-achị ebo iri n’Izrel (26-40)
Solomọn nwụrụ, Rehoboam achịwazie (41-43)
11 Ma, Eze Solomọn hụrụ nwa Fero+ na ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị ọzọ si mba ọzọ n’anya,+ ma ụmụ nwaanyị ndị Moab,+ ma ndị nke Amọn,+ ma ndị nke Ịdọm, ma ndị nke Saịdọn,+ ma ndị nke Het.+ 2 Ha si ná mba ndị ahụ Jehova gwara ndị Izrel gbasara ha, sị: “Unu na ha emekọrịtakwala ihe,* n’ihi na ha ga-arata unu* ka unu fewe chi ha.”+ Ma Solomọn bịara na-akpa ha nnọọ nso, hụkwa ha n’anya. 3 Ọ lụrụ narị ụmụ nwaanyị asaa (700), bụ́ ụmụ ndị eze, nweekwa narị ndị iko atọ (300). Ndị nwunye ya jikwa nwayọọ nwayọọ mee ka obi ya gharazie ịdị n’ife Chineke. 4 Mgbe Solomọn mere agadi,+ ndị nwunye ya mere ka o fewe chi ọzọ dị iche iche.+ O jighị obi ya niile fee Jehova bụ́ Chineke ya. O meghị ka Devid nna ya, onye ji obi ya niile fee Chineke. 5 Solomọn bidoro ife Ashtọret,+ bụ́ chi* ndị Saịdọn, nakwa Milkọm,+ bụ́ chi rụrụ arụ ndị Amọn na-efe. 6 Solomọn mere ihe dị njọ n’anya Jehova, o jighịkwa obi ya niile fee Jehova. O meghị ka Devid nna ya, onye ji obi ya niile fee Chineke.+ 7 Mgbe ahụ ka Solomọn rụrụ ebe dị elu+ a ga-anọ na-efe Kimọsh, bụ́ chi rụrụ arụ ndị Moab na-efe, rụọkwa ebe a ga-anọ na-efe Molek,+ bụ́ chi rụrụ arụ ndị Amọn na-efe.+ Ọ rụrụ ha n’ugwu chere Jeruselem ihu. 8 Ọ rụkwaara ndị nwunye ya niile, bụ́ ndị mba ọzọ, ebe dị elu ha ga-anọ na-esu àjà ọkụ. 9 Jehova wesara Solomọn ezigbo iwe maka na o jighịzi obi ya niile na-efe Jehova bụ́ Chineke Izrel,+ onye mere ka ọ hụ ya ná nrọ ugboro abụọ,+ 10 dọọkwa ya aka ná ntị ka ọ ghara ịga fewe chi ọzọ dị iche iche.+ Ma, o geghị Jehova ntị. 11 Jehova gwaziri Solomọn, sị: “N’ihi ihe a i mere, nakwa n’ihi na i mebiri ọgbụgba ndụ m, i debeghịkwa iwu ndị m nyere gị, m ga-anapụta gị alaeze a nye ya otu n’ime ndị na-ejere gị ozi.+ 12 Ma n’ihi Devid nna gị, agaghị m eme ya n’oge ị dị ndụ. Kama, ọ bụ nwa gị nwoke ka m ga-anapụta ya.+ 13 Ma, ọ bụghị alaeze a niile ka m ga-anapụta ya.+ M ga-enye nwa gị nwoke otu ebo+ n’ihi Devid ohu m nakwa n’ihi Jeruselem, bụ́ obodo m họọrọ.”+ 14 Jehova meziri ka Solomọn nwee onye iro.+ Onye iro ahụ bụ Hedad onye Ịdọm, onye si n’ezinụlọ eze ndị Ịdọm.+ 15 Mgbe Devid meriri Ịdọm,+ Joab bụ́ onyeisi ndị agha ya gara ili ndị e gburu egbu, gbaakwa mbọ igbu nwoke ọ bụla nọ n’Ịdọm. 16 (Joab na ndị agha Izrel niile biri ebe ahụ ọnwa isii ruo mgbe o gbuchara ụmụ nwoke niile nọ n’Ịdọm.) 17 Ma, Hedad na ụfọdụ ụmụ nwoke ndị Ịdọm ndị na-ejere nna ya ozi gbapụrụ, gbaga Ijipt. Hedad ka bụ nwata mgbe ahụ. 18 Ha si Midian gaa Peran. Ha kpọọrọ ụmụ nwoke ndị Peran+ gaa Ijipt gakwuru Fero eze Ijipt, ya enye Hedad ụlọ, nye ya ala, na-enyekwa ya nri. 19 Ihe Hedad masịrị Fero, nke na ọ kpọnyere ya nwanne nwunye ya ka ọ lụwa, ya bụ, nwanne Tapenes bụ́ nwunye eze. 20 Ka oge na-aga, nwanne Tapenes mụtaara Hedad nwa nwoke. Aha nwa ahụ bụ Genubat. Tapenes kpọọrọ ya, nọrọ n’ụlọ Fero na-azụ ya.* Genubat na ụmụ Fero nọkwa n’ụlọ Fero. 21 Hedad nọ n’Ijipt nụ na Devid anwụọla otú nna nna ya hà nwụrụ+ nakwa na Joab bụ́ onyeisi ndị agha anwụọla.+ N’ihi ya, Hedad sịrị Fero: “Hapụ m ka m laghachi n’obodo m.” 22 Ma Fero sịrị ya: “È nwere ihe kọrọ gị ebe a mụ na gị nọ, nke mere i ji na-achọ ịlaghachi n’obodo gị?” Ya asị ya: “Ọ dịghị ihe kọrọ m, ma hapụ m ka m laa.” 23 Chineke mekwara ka Solomọn nwee onye iro ọzọ,+ ya bụ, Rizọn nwa Elayada, onye gbapụrụ na nke onyenwe ya, bụ́ Hadadiza,+ eze Zoba. 24 Mgbe Devid meriri* ndị Zoba, Rizọn kpọkọrọ ụmụ nwoke ụfọdụ, ha aghọọ ìgwè ọ lụọ ọ gbalaga, yanwa abụrụ onyeisi ha.+ Ha gara biri na Damaskọs,+ malitekwa ịchị ebe ahụ. 25 Ọ nọ na-emegide ndị Izrel n’oge niile Solomọn na-achị, n’otu oge ahụ Hedad nọkwa na-enye ndị Izrel nsogbu. Rizọn ejighị anya ahụ ndị Izrel mgbe ahụ ọ na-achị ndị Siria. 26 Onye ọzọkwa malitere inupụrụ Solomọn isi+ bụ Jeroboam+ nwa Nibat, onye Zereda dị n’Ifrem. Jeroboam bụ onye na-ejere Solomọn ozi.+ Aha nne ya bụ Zerua, nwaanyị isi mkpe. 27 Otú a ka o si malite inupụrụ Solomọn isi: Solomọn rụrụ Milo,*+ rụsiekwa Obodo Devid, bụ́ obodo nna ya, ike.+ 28 Ma, Jeroboam bụ nwoke gbasiri ike. Mgbe Solomọn hụrụ na ọ na-arụsi ọrụ ike, o mere ya onye na-elekọta+ ndị o si n’ebo Josef kpọrọ ka ha na-arụ ọrụ. 29 N’oge ahụ, Jeroboam si na Jeruselem pụọ, Ahaịja onye amụma+ ahụ ya n’ụzọ. Ahaịja bụ onye Shaịlo, o yikwa uwe ọhụrụ mgbe ahụ. Naanị ha abụọ nọkwa. 30 Ahaịja wee dọwaa uwe ọhụrụ ahụ o yi iberibe iberibe ụzọ iri na abụọ. 31 Ọ gwakwara Jeroboam, sị: “Chịrị iberibe iri, n’ihi na Jehova bụ́ Chineke Izrel kwuru, sị: ‘M ga-anapụta Solomọn alaeze ya, m ga-enyekwa gị ebo iri.+ 32 Ma, otu ebo ga-abụ nke ya+ n’ihi ohu m Devid+ nakwa n’ihi Jeruselem, bụ́ obodo m họọrọ n’ebo niile n’Izrel.+ 33 Ihe mere m ga-eji napụta ya alaeze ya bụ maka na ndị m ahapụla m,+ na-akpọrọ chi ọzọ dị iche iche isiala, ma Ashtọret bụ́ chi* ndị Saịdọn, ma Kimọsh bụ́ chi ndị Moab, ma Milkọm bụ́ chi ndị Amọn. Ha anaghị eme ka Devid nna Solomọn. Ha anaghị eme ihe otú m kwuru, ha anaghị eme ihe ziri ezi n’anya m, ha anaghị eso ntụziaka m, ha anaghịkwa eme ihe ndị m kpebiri. 34 Ma agaghị m anapụ ya alaeze ahụ niile. M ga-ahapụ ya ka ọ bụrụ onyeisi n’oge niile ọ dị ndụ, n’ihi ohu m Devid, bụ́ onye m họọrọ+ maka na o debere iwu m, sorokwa ntụziaka m. 35 Ma, m ga-anapụta nwa ya nwoke ebo iri ọ na-achị ma nye gị ha.+ 36 M ga-enye nwa ya otu ebo, ka e nwee onye si n’ezinụlọ ohu m Devid ga na-achị* n’ihu m na Jeruselem,+ bụ́ obodo m họọrọ ka a nọrọ na-eto aha m. 37 M ga-akpọrọ gị, ị ga-achịwa ebe niile ị chọrọ* ịchị, ị ga-abụkwa eze Izrel. 38 Ọ bụrụ na i debe iwu niile m ga-enye gị, na-eje ije n’ụzọ m, na-eme ihe ziri ezi n’anya m, na-eme ihe ndị m kwuru, na-edebekwa iwu m, otú ohu m Devid mere,+ m ga-anọnyere gị, meekwa ka ndị ezinụlọ gị chịtee aka, otú m meere ezinụlọ Devid.+ M ga-enyekwa gị Izrel. 39 M ga-eweda ụmụ Devid ala n’ihi ihe a ha mere,+ ma m gaghị eme ya mgbe niile.’”+ 40 Ihe a mere ka Solomọn chọwa otú ọ ga-esi gbuo Jeroboam. Ma, Jeroboam gbagara Ijipt, gbakwuru Shaịshak+ eze Ijipt.+ Ebe ahụ ka ọ nọkwa ruo mgbe Solomọn nwụrụ. 41 E dere akụkọ ndị ọzọ gbasara Solomọn n’akwụkwọ e dere gbasara ndụ ya. E dere ihe niile o mere nakwa otú o si mara ihe.+ 42 Solomọn nọ na Jeruselem chịa Izrel niile afọ iri anọ. 43 N’ikpeazụ, Solomọn nwụrụ otú nna nna ya hà nwụrụ, e liekwa ya n’Obodo Devid nna ya. Rehoboam nwa ya+ nọchiri ya, malite ịchị.
^ Ma ọ bụ “Unu na ha agọkwala ọgọ.”
^ Na Hibru, “ga-enweta obi unu.”
^ Ya bụ, chi nwaanyị.
^ O nwere ike ịbụ, “kwụsị ya ara.”
^ Na Hibru, “gburu.”
^ Na Hibru, “ka e nwee ọkụ ohu m Devid ga na-enwu mgbe niile.”
^ Ma ọ bụ “mkpụrụ obi gị chọrọ.”
1 Ndị Eze 11